Sidee Buu Kitaabka Quduuska ah Kuu Caawin Karaa? — ONLINE LAYBREERIGA Watchtower
lffi cashar 1
Gebigeen suʼaalo baan ka qabnaa nolosha, rafaadka, dhimashada iyo mustaqbalka. Waxaan xitaa sidoo kale ka welwelnaa arrimaha nolol maalmeedka ah, sida helidda qoys faraxsan iyo lacag nagu filan. Dad badan baa arkay inuu Kitaabka ka jawaabo suʼaalaha waaweyn ee nolosha. Waxay kaloo ogaadeen inuu Kitaabka bixiyo talo waxtar leh. Adiguna ma u maleysaa inuu Kitaabka Quduuska ah ina anfaci karo?
1. Suʼaalo caynkee ah ayuu Kitaabku ka jawaabaa?
Kitaabka Quduuska ah wuxuu ka jawaabaa suʼaalahan muhimka ah: Sidee bay noloshu u bilaabatay? Waa maxay micnaha nolosha? Maxay dad waxba galabsan u rafaadaan? Maxaa dhaco markaan dhimanno? Haddii qof walba nabad doonayo, maxay dagaallo badan uga jiraan dunida? Mustaqbalka maxaa ku dhici doono dunida? Kitaabku wuxuu inagu guubaabiyaa inaan raadinno jawaabaha suʼaalahaas. Malaayiin qof ayaa aad ugu qancay jawaabaha ay heleen.
2. Kitaabku sidee buu maalin kasta inoogu caawin karaa nolosheenna?
Kitaabka Quduuska ah wuxuu ina siiyaa talo fiican. Tusaale ahaan, reeraha wuxuu baraa habka ay farxad run ah u heli karaan. Wuxuuna bixiyaa talo ku saabsan sida aan shaqadeenna farxad ugu heli karno iyo sida loola macaamiloodo cadaadiska nolosha. Wargeyskan waxaad ka baran doontaa wuxuu Kitaabku ka sheego mawduucyadan iyo kuwo kale oo badan. Waxaa laga yaabaa inaad aragtid runta kelmedahan ‘Qorniin kasta [ee Kitaabka Quduuska ah] . . . waxtar buu leeyahay.’​—2 Timoteyos 3:16.
Wargeyskan loogu ma talaggelin inuu qaato booska Kitaabka Quduuska ah. Laakiin wuxuu kugu dhiirrigelinayaa inaad Kitaabka iskaaga u baadhid. Sidaas darteed waa muhim inaad akhrisid aayadaha ku taxan casharradan oo adna barbardhigtid waxaad baranaysid.
Bal baro siduu Kitaabka dadka u caawiyay iyo sidaad akhriskiisa u jeclaan kartid. Arag sababta ay u fiican tahay inaad caawimaad u doonatid fahamkiisa.
3. Kitaabka tilmaan ayuu ina siin karaa
Kitaabka waa sida nal iftiin badan. Wuxuu ina tusi karaa habka goʼaammo wanaagsan loo qaato iyo waxa mustaqbalka soo socda.
Akhri Sabuurradii 119:105, kaddibna ka wadahadla suʼaalahan:
Nebigii qoray sabuurraddan sidee buu u arkay Kitaabka?
Adigana Kitaabka sidee baad u aragtaa?
4. Kitaabka wuu ka jawaabi karaa suʼaalaheenna
Haweenay baa Kitaabka ka heshay jawaabo ay sanado badan raadinaysay. Daawo FIIDIYOWGA, oo kaddibna ka hadla suʼaalaha hoos ku qoran.
FIIDIYOWGA: Weligaa Ha Rajo Beelin! (1:48)
Suʼaalahee bay qabtay haweenayda fiidiyowgan ku jirta?
Sidee bay caawimaad uga heshay dhigashada Kitaabka?
Kitaabka Quduuska ah wuxuu inagu dhiirrigeliyaa inaan suʼaalo isweyddiinno. Akhri Matayos 7:7, kaddibna ka hadla suʼaasha hoos ku qoran:
Suʼaalahee ayaad jeclaan lahayd inuu Kitaabka kaga jawaabo?
5. Akhriska Kitaabka wuxuu noqon karaa mid xiiso leh
Dad badan baa jecel akhriska Kitaabka Quduuska ah oo wax badan ka faaʼiiday. Daawo FIIDIYOWGA, kaddibna ka hadla suʼaalaha hoos ku qoran.
FIIDIYOWGA: Akhriska Kitaabka (2:05)
Dhallinyarada fiidiyowgan ku jira, wax akhriska may jecel yihiin?
Laakiin maxay hadda u xiiseeyaan akhriska Kitaabka?
Kitaabka wuxuu ina siin karaa tilmaan rajo iyo gargaar leh. Akhri Rooma 15:4, kaddibna ka hadla suʼaasha hoos ku qoran:
Rajada iyo gargaarka uu Kitaabka ballanqaaday may ku xiiso geliyaan?
6. Fahmidda Kitaabka way fududdahay markay dadka kale ina caawiyaan
Dad badan oo Kitaabka shakhsi ahaan u akhriyay baa ogaaday in wadahadalkiisu waxtar leeyahay. Akhri Falimaha Rasuullada 8:26-31, kaddibna ka hadla suʼaasha hoos ku qoran:
Kitaabka micnihiisa sidee baan u fahmi karnaa?—Eeg aayadaha 30 iyo 31.
Ninkii Xabashiga ahaa caawimaad buu u baahnaa siduu Kitaabka u fahmo. Sidoo kale, dad badan bay anfacday inay Kitaabka qof kale kala hadlaan
DADKA QAARKOOD WAXAY DHAHAAN: “Dhigashada Kitaabka waa waqti lumis.”
Adigu maxaad oran lahayd? Sidaas maxaad u tiri?
Kitaabka wuxuu talo ka bixiyaa waxyaalaha nolol maalmeedka ah wuxuuna ka jawaabaa suʼaalo muhim ah, gargaar iyo rajo buuna dadka siiyaa.
Talo sidee ah ayaan Kitaabka Quduuska ah ka heli karnaa?
Suʼaalo caynkee ah ayuu Kitaabku ka jawaabaa?
Maxaad jeclaan lahayd inaad Kitaabka ka baratid?
Akhri qaybta ugu horreysa ee casharka labaad.
Bal eeg talada Kitaabka siday maanta waxtar u leedahay.
“Bible Teachings​—Timeless Wisdom” (The Watchtower Lam. 1 2018)
Fiiri siduu Kitaabku u kaalmeeyay nin ilaa yaraantiisii la dhibanaa dareemo xunxun iyo kalsoonidarro.
Habka Aan u Helay Nolol Cusub oo Farxad Badan (2:53)
Arag talada waxtarka leh uu Kitaabku reeraha siiyo.
“12 Secrets of Successful Families” (Awake! Lam. 2 2018)
Daawo siduu Kitaabka u saxo fekrado qaldan oo ku saabsan midka dunida maammulo.
Maxaa loo Bartaa Kitaabka Quduuska ah?—Fiidiyowga Dheer (3:14)